नेपालमा फेरि यस्तो : गाईवस्तुमा पनि देखियो नयाँ भाइरस – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा फेरि यस्तो : गाईवस्तुमा पनि देखियो नयाँ भाइरस
नेपालमा फेरि यस्तो : गाईवस्तुमा पनि देखियो नयाँ भाइरस
नवलपरासी- कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्वब्यापी महामारी भइरहेकाबेला गाईवस्तुमा पनि नयाँ भाइरस देखा परेको छ ।
पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाबाट गाईबस्तुमा देखापरेको यो भाइरस अहिले गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरुमा पनि देखा परेको छ ।
कास्की, तनहुँ, नवलपरासीपूर्व तथा प्रदेश ३ को चितवनमा पनि गाईवस्तुमा नयाँ भाइरस देखा परेको छ ।
तनहुँको विभिन्न ठाउँका गाईवस्तुमा संक्रामक रोग देखापरेपछि काठमाडौ पठाई परीक्षण गर्दा ‘लम्पी स्क्रिन डिजिज’ नामको भाइरस देखा परेको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र दमौलीका प्रमुख डा. बालकुमार श्रेष्ठले बताए ।
तनहुँको ब्यास नगरपालिका लगायत विभिन्न ठाउँमा देखिएको यो संक्रामक रोग अहिले नवपरासीपूर्वको जिल्लामा पनि फैलिएको श्रेष्ठले बताए ।
के हो लम्पी स्क्रिन डिजिज ?
विज्ञकेन्द्रका प्रमुख डा. श्रेष्ठकाअनुसार लम्पी स्क्रिन डिजिज खासगरी अफ्रिकामा मात्रै सीमित हुने रोग हो । यो पछि यूरोपका देशहरु हुँदै संसारका विभिन्न देशहरुमा फैलियो । यो संक्रामक रोग सन् २०१२ मा मध्यपूर्वी यूरोप हुँदै एशियामा पनि प्रवेश गरेको श्रेष्ठले बताए ।
गाईवस्तुमा लाग्ने यो रोग पछिल्लो समय बंगलादेशबाट भारत हुँदै नेपालको झापा जिल्लामा पहिलो पटक देखा परेको हो ।
एउटा बस्तुमा लागेपछि बथानमा रहेका अन्य गाईबस्तुमा यो भाइरस सजिलै सर्ने गरेको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
लामखुट्टे, झिँगा, किर्ना लगायतका किराहरुबाट रोग सर्ने गरेको पशु चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो रोग लागिसकेपछि यसको ठोस उपचार नभएको पशुविज्ञ केन्द्र दमौलीका प्रमुख श्रेष्ठले बताए ।
चिकित्सककाअनुसार यो रोग लाग्दा गाईवस्तुमा १०४ डिग्रीभन्दामाथि ज्वरो आउने, आँखामा कचेरा लाग्ने, फिँज काढ्ने, घाँटी, पेट, कल्चौंडाको वरिपरि १० देखि ५० एमएमसम्मको गिर्खाहरु आउने जस्ता लक्षणहरु देखिने गर्छन् ।
गाईवस्तु आवतजावतमा प्रतिबन्ध
गाईबस्तुमा यो संक्रामक रोग लागेपछि विभिन्न जिल्लामा गाईवस्तुको एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावतमा रोक लगाइएको छ ।
पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाको वडा नम्बर १४ र १७ मा ब्यापक रुपमा संक्रमण फैलिएको कासोती नगरपालिकाका पशुशाखा प्रमुख डा.टेकराज पौडेलले बताए ।
संक्रामक रोग फैलिन नदिन नगरपालिकाले सूचना नै प्रकाशित गरी गाईबस्तु ओसारपसारमा रोक लगाएको छ ।
यो रोग लागिसकेपछि गाई भैंसीको दूध उत्पादन घट्दै जानुका साथै बाँझोपना हुने तथा गर्भरहेको गाईबस्तुको गर्भ तुहिने समस्या हुने डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यो संक्रामक रोगबाट अहिलेसम्म ५ प्रतिशतसम्म मात्रै मृत्यु दर रहेको उनले बताए । गोठको सरसफाइमा ध्यान दिने तथा लामखुट्टे, झिँगा, किर्नाबाट बचाउनुपर्ने पशु प्राविधिकहरुको सुझाव छ ।
गाईभैंसीमा नयाँ संक्रामक रोग फैलिएपछि चितवनका विभिन्न पालिकाले किटनाशक औषधि छर्ने काम गरेको छ ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका, राप्ती नगरपालिकालाई प्रदेश कार्यालयले पठाएको औषधि वितरण अभियान चलाएको छ ।
अँध्यारोको व्यापार: अँध्यारोमै राख्ने ‘अपराध’ का नाइके मुकेशराज काफ्ले